?Muranka ka dhex taagan mudanayaasha federaalka waa mid lagu carqaladaynayo shirka Garowe si uusan u dhicin? Madaxweyne Faroole. – Radio Daljir
?Muranka ka dhex taagan mudanayaasha federaalka waa mid lagu carqaladaynayo shirka Garowe si uusan u dhicin? Madaxweyne Faroole.
Diseembar 16, 2011 12:00 b 0
Garowe, Dec 16 ? M/weynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa majo-xaabin shireed ku tilmaamay fadhigii mudanayaash baarlamaanka dawladda federaalku ay dhawaan ku yeesheen magaalada Muqdisho kaasoo ay ku sheegeen in ay xilkii qaadeen guddoomiyahoodii Shariif Xasan Sheekh Aadan.
M/weyne Faroole, ayaa tilmaamay arrintaasi in uu ahayd mid sharci-darro isla markaana baal-marsan qawaaniinta dalka u yaalla, waxaana uu intaasi raaciyey kulankaasi baarlamaan in looga gollahaa oo kaliya sidii loo carqaladayn lahaa qabsoomidda shirka magaalada Garowe.
Md. Faroole, ayaa sheegay xildhibaannada federaalku in ay diidan yihiin qorshaha tubta nabadda oo ay ku jirto dib-u-habayn iyaga laftigooda lagu samaynayo, taasoo ay ka cago-jiidayaan in ay hirgasho sida uu tilmaamay madaxweyne Faroole.
?In badan oo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka waa dagaal-oogayaashii Soomaaliya, waana ku halkaasi dhigau ummadda Soomaaliyeed, in kale oo baarlamaanka ka mid ahna waa kuwo iskood ku yimid meesha ee aan cidna dooran, deegaanna matalin? ayuu yiri madxweyne Faroole.
M/weynaya ayaa hadalkaan ka sheegay shir jaraa?id oo uu maanta ku qabtay xarunta Jamacadda PSU ee magaalada Garowe halkaasi oo ah goobta loogu talo galay in lagu qabto shirka wadatashiga Soomaalida, waxaana uu shirkaan jaraa?id uu yimid xilli isaga iyo wafti ka socda QM, UN-ka, IGAD iyo dawladda federaalku ay kormeereen goobtaasi shirka loogu talo galay.
?Waa been abuur iyo hadalo aan jirin in Garowe loosoo wareejinaayo dhammaan duulimaadyadii kasoo dagi-jiray magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boossaaso? Agaasimaha garomada Siciido Xuseen Cali.
Baahin: Khamiis, Dec 15, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Odayaasha dhaqanka ee koonfurta Mudug oo ka hadlay amniga gobolka, kuna baaqay is-kaashi; Maamulka gobolka Cayn oo ku eedeeyey Somaliland faragelin siyaasadeed, digniinna u diray; Khilaafka mudanayaasha baarlamaanka federaalka oo sii laba-kacleeyey; Afhayeen Shariif Xasan oo ku gacan-sayray xilka qaadista.